Shirkada Isgaarsiinta Golis Telcom oo Qiimo dhimis balaaran ku samaysay adeega 4G. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Shirkada Isgaarsiinta Golis Telcom oo Qiimo dhimis balaaran ku samaysay adeega 4G.
Shirkada Isgaarsiinta Golis Telcom oo Qiimo dhimis balaaran ku samaysay adeega 4G.
August 18, 2018 - By: Mohamud Nadif
Munaasabaadn oo ay kasoo qaybgaleen boqolaal shacab ah oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qabsoonta hotelka Embeeya, shirkada isgaarsiinta Golis Telecom ayaana soo bandhigtay qiima dhimis balaaran oo a ku samaysay adeega 4G oo inta badan ay isticmaalaan shacabka deegaanada Puntland, madaxda shirkadu waxa ay sheegeen markii ay arkeen baahiyaha bulshada in ay goaansadeen kordhintada tayada internetka ee shirkada.
Maareeyaha Shirkada Golis Qardho sheekh Cali Mxamed Cali iyo maareeye ku xigeeka Cali Maxamed Salah waxay sheegeen in shirkadu ay diyaar u tahay sidii ay macaamiishooda uga haqabtiri lahaayeen adeega isgaarsiinta iyo midka internetka , sidoo kalena ay diyaar u yihiin sidii ay bulshadooda wax ugu soo celin lahaayeen.
Jaamac Xasan Bare ku xigeenka madaxa suuq gaynta shirkada Golis oo ugu horayn goobta ka hadlay waxa uu sharaxay ahmiyada uu baraamijka 4G u leeyahay bulshada, sidoo kale waxa uu sheegay in shirkadu dhawaan soo wado adeeg ka casrisan midkaan oo 5G ah, ugu danabyn bulshada Puntland ayuu ugu baaqay in ay ka faaidaystaan adeegaan.
Qaar ka mida kasoo qaybgalayaasha munaasabada oo kelmado kala duwan goobta ka jeediyay waxay hoosta ka xariiqeen in shirkada Golis ay dalka ka taabagelisay adeeg isgaarsineed oo waqti loo baahnaa yimi, sidoo kale waxay uga mahadceliyeen sida ay bulshada soomaaliyeed ula jaanqadeen dadyawga dunida iyagoo dhulkooda jooga.
Gudoomiyaha Gobolka Karkaar, Duqa Degmada Qardho iyo madax kale oo ka tirsan dawlada oo munaasabada ka hadlay waxay ku dheeraadeen dawrka ay Golis ka qaadatay shaqa abuurka ay u samaysay muwaadiniita soomaliyeed, sidoo kale waxay ku dheeraadeen taageerada ay ka gaysato goobaha loogu adeego bulshada.
Ugu danbay waxaa munaasabada adeega 4G lagu gudoonsiiyay qaar ka mida macaamiisha shirkada Golis ee ku sugnaa xarunta kuwaas oo si nasiib ah ugu guuleystay, shirkada Golis ayaa lagu amaanay dawrka ay qaadatay horumarinta adeega isgaarsiinta ee bulshada.